musha / Interior design / 120㎡Nzvimbo Yemazuva Ano, Nzvimbo Inogadzikana Pasi Peiyo Yakanyanya-Kuwanda Hupenyu | Hongfu Gauge Dhizaini
2021 / 05 / 29 kupatsanuraInterior design 6365 0
Xiaoge Yemukati Dhizaini Mubatanidzwa
Muridzi wemba wechirume mainjiniya nebasa. Anopedza angangoita mavhiki ake ega pamba aine mukadzi wake nevana. Iye anoda yazvino uye minimalist maitiro. Nekuti pasi pehomwe yezuva nezuva yebasa repamusoro-soro, yekugara yakapfava uye yakasununguka inogona kudzikamisa mweya wakasununguka uye kurega uropi huchifema.
Nekuda kwekushomeka kwenzvimbo yekuchengetera pamusuwo wekutanga, isu takatsiva zvachose chimiro chepakutanga ndokuchigadzirisa zvakare kuita bhutsu ichichinja + nzvimbo yekuchengetera nehurefu hwese hwe2705mm. Inotaridzwa inopenya chena ruvara nehuni ruvara. Kubva pamusuwo wekupinda, ruzha runodzoreredzwa kune runyararo, ichigadzira inonakidza, inonyudza uye inoyevedza mhando.
Munguva yekusiyana kwenzvimbo dzehofisi, maitiro ehupenyu ari kuchinjawo zvishoma nezvishoma. Iyo yekutanga TV madziro nesofa madziro akachinjiswa muchinzvimbo kuti achinje mutsetse wezvekugara zviitiko parutivi rwe master yekurara uye kudzidza. Uchishandisa hurefu hwese hwe9575mm kabati, mukova uye madziro eTV akabatanidzwa mune rimwe divi. Izvi zvinovanza kudzidza uye tenzi yekurara mairi, zvichipa zvinonakidza zvinoreva nzvimbo.
Pauriri hwegumi nepfumbamwe hwenzvimbo yepamusoro, mwenje unouya kubva kumahwindo mahombe unonyaradza. Iyo pasi, madziro uye siringi zvakatsiviwa neakawanda zvinhu zvakatipoteredza nekuti mwana akangosvitsa makore maviri. Iyo yakachena, yakaoma mitsara, girazi, dehwe, dombo, uye huni veneer zvakagadziridzwa, uye akasiyana echisikigo zvigadzirwa uye mavara zvakapa iyo yekutandarira nzvimbo imwe yakadzedzereka pfungwa yehutongi.
Zvese zvese zviri muchadenga zvinoratidza kunaka kwekubatanidzwa. Iyo yakasikwa kara scheme haingoiti kuti zvive nyore kuti vanhu vakuru vazorodze, asi zvakare inobvumira vana kuti vanzwe pfungwa yehukama uye hunyoro chengetedzo. Kunyangwe vari vega kana nemhuri, vanozonzwa vakasununguka semhedzisiro.
Inzwa hukama pakati pechiedza nenzvimbo. Rusvingo rweimba yekudyira rwakagadzirwa nemarble nekubata kwechisikigo, izvo zvakasiyana nedombo rakatemwa reimba yekutandarira. Iwo maratidziro emusiyano anosimbisa zvinhu zvakasiyana.
Rutivi rwemberi rwakagadzirwa se2730mmx350mmx1100mm kuchengetedza midziyo yezuva nezuva yevana. Uye pakafura pakatarisana panobata zvigadzirwa zvemagetsi zvekugadzira zvekuwedzera chikafu, pamwe nemagineti socket, inogona kushambadzirwa pamadziro pamadiro, kuchengetedza nzvimbo uye nyore kushandisa.
Musuwo usingaonekwe unoparadzanisa tenzi yekurara uye nzvimbo yekudzidza kubva kunzvimbo yeruzhinji, ichiita tambo ine simba ichifadza. Inoita kunge isingaonekwe maonero, asi zvakare inzvimbo yakakosha. Kunze kwevagari pachavo, hapana munhu anogona kuwana ipapo chaipo nzvimbo yemusuwo pavanoshanya kekutanga.
Iyo tenzi yekurara ine yakawanda nzvimbo, saka isu takashandisa iyo 3m² nzvimbo kugadzira 2100mmx600mm L -yakaita yekutarisa. Imba yekurara yakashandurwa kuita suite ine yekugezera uye cheki yekushandisa.
Madziro ari pamusoro pemubhedha akagadzirwa segirazi regirazi rakaomarara, rinotaridzika kutsva uye rakachena pamwe chete nechena inopenya pamusoro. Kuti usatarise kusarongeka, pasi paive pakaiswa zvakare nemusanganiswa wemavara. Iyo yakapfava mhepo inodzinga kutonhorera kunounzwa neazvino uye inoita iyo yekurara nzvimbo kugadzikana uye kugadzikana.
Musuwo wekutanga wechidzidzo unochengetwa, uye kubva kunze kwemusuwo usingaonekwe, unogona kupihwa pekushandisa neye master bedroom suite, asi kubva mukati, inoramba iri nzvimbo yakazvimiririra. Rutivi rwe3270mm kumadziro rwakagadzirwa senzvimbo yese yekuchengetera, uye mubhedha wekutsvedza wakaiswa mukati pasi pekabati. Inoita basa rechipiri yekurara isina kukanganisa nzvimbo.
Mwana anorara kwenguva pfupi nevabereki vake mune tenzi yekurara, uye imba yevana ndiyo nzvimbo yake yekutamba kwenguva iripo. Naizvozvo, takagadzira rimwe divi remadziro kuti ripendwe nebhodhi, uye takaratidza maficha ezvisikwa pamugovanisi. Kune rimwe divi, takaisa mabhuku emifananidzo uye matoyi, uye iyo yakazara mhepo yakanaka uye inozorodza. Yakafanana neparadhiso diki pamusha.
Iyo yekutanga yekupinda shangu kabhineti yakabviswa uye yakagadzirirwa seyekuchengetera kabati yakabatanidzwa nemudhuri weTV. Akashandisa musuwo usingaonekwe kupatsanura nzvimbo yeruzhinji kubva kune yega nzvimbo uye kukwidziridza mutsetse wekugara weimba yese.
Kubva pakadzika kusvika kumatatu-matatu, akawedzera musuwo usingaonekwe kuti apatsanure nzvimbo yekutanga kuita maviri, achigadzirisa mashandiro uye mutsetse wekugara. Akashandura iyo yekare uye isina kusimba imba yekuvhara yakaoma kuita akasiyana uye anonakidza nzvimbo nyowani. Isu takagadziridza siringi, madziro uye pasi zvichienderana nezvinodiwa nemuridzi zvemweya weimba. Kusiyana neyakajairika echando echimanjemanje, inodziya yakasarudzika kara palette inoshandiswa seye toni toni, uyezve kunyarara kwehuni zvinhu zvinosanganisirwa. Nekuparadzanisa, kupindirana uye kupindira zvinhu zvemhando dzakasiyana, nzvimbo inodzedzereka uye chic, kuitira kuti uwane mweya wakasununguka uye wakasununguka muhupenyu kune vanogara uye nekudaro kuwedzera rugare rwemukati rwemweya.
Type: makamuri mana nedzimba mbiri
Mutengo: 40w (kuzadza zvachose imba yakashongedzwa)
Sevhisi modhi: Yakagadziridzwa imba, yakazara dhizaini, yakaoma kuisikidza kuvaka
Kero yeprojekti: Chengdu. Poly Xigong Mansion
Chikwata chebasa: Chengdu Hongfuji Dhizaini
Pakapfuura :: Iyo Space-Nguva Yakaomarara Inoyerera Nesimba Simba | Tikai Yemukati Dhizaini Zvadaro: Geometry + Inodziya Uye Inotonhora Makara, Vaka Iyo Yakachena Aesthetic Mood | Haili Dhizaini